Kabtanka Liverpool Ee Henderson Oo Diiday In Saalax Lala Barbardhigo Suarez + Sababta %
Kabtanka kooxda kubada cagta Liverpool ee Jordan Henderson ayaa wuxuu sheegayaa in wax aan dhici karin ay tahay in labadda ciyaaryahan ee uu lasoo shaqeeyay ee kala ah: Maxamed Saalax iyo Luis Suarez leysla barbardhigo, Saalax ayaa wuxuu dhaliyey guud ahaan fasal ciyaareedkan 36 gool dhamaan tartamada oo dhan, waxaana uu ka badan yahay ciyaaryahan walba oo Liverpool udheela, isagoona sidoo kale ah gooldhaliyaha ugu sareeya tartanka Premier League.
Laacibka reer Masar ayaa wuxuu dhaliyay Afar gool kulankii ay soo dar-dareen Sabtidii dhigooda Watford, markaasoo uu shaqo wacan qabtay, isagoona kooxdiisa soo geliyay kaalinta Sadexaad marka loo eego shaxda kala horeynta ee EPL.
“Waa labo ciyaaryahano oo kala duwan, marnaba isla barbardhigi kartay, maxaa yeelay waxay leeyihiin labo qaab ciyaareed oo kala duwan,” ayuu ku shaxar Kabtanka naadiga Liverpool iyo qaranka England khadka dhexe uga dheela.
“Waan ognahay inay dhalinayaa goolal, laakiin marnaba leysma barbardhigi karo – Suarez wuxuu u aaday Barcelona kadib markii uu sameeyay muuqaal ciyaareed cajiib ah, waana uu uqlmay inuu halkaas aado,” ayuu hadalkiisa ku daray.
“Laakiin, Saalax wuxuu sanad ciyaareedkan yahay mid aan dhab ahaantii la aamini kari, waa mid aan la aamini karin, xaqiiqadii wuxuu Isbuuc walba sameynayaa wax aan la qiyaasi karin, isagoona aanan marnaba guul dareysan,” ayuu ku celceliyey.
“Saalax wuxuu shabaqa soo taabtaan, waqtiyadda ay ugu adag tahay in la sameeyo, marka aad haysato ciyaaryahan isaga lamid ah, waxaad udhow dahay mar walba mid guusha heli kara maxaa yeelay waa ciyaaryahan cajiib ah,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.
Falanqeynta : Kullanka adag ee u Dhaxeeya Kooxaha Heegan Iyo Waxool